SIDA SIDA LOO ISTICMAALAYO Suuq-geynta Daariyadeed
Weligaa ma yaabtay sida SEO-yagu saameyn ugu yeelanayo wacyigalinta suuq geynta? Weli kama helin jawaab cad Walaac ma leh. Maanta, waxaan kuu sharxi doonaa si faahfaahsan intee le'eg suuqgeynta webka waxay ku xiran tahay raadinta mashiinka raadinta.
Sida aad hore u ogtahay, SEO ayaa badashay sannadihii ugu dambeeyey. Waxaa loo kobciyay oo ka tegey farsamooyinka muhiimka ah oo aan hore loo isticmaalin iyo kuwa farsamooyinka ah ee caan ah oo aad u caan ah ee badhtamihii 1990aadkii. Sannadkii 2005, xitaa ganacsiyada yaryar iyo bilawga ayaa bilaabay in ay kiraystaan ​​dhoofinta SEO-yada oo balan qaaday in ay gacan ka geysan doonaan kordhinta taraafikada iyo iibinta.
Ma jiro wax diidaya in 2017 SEO weli ka ciyaaraan door muhiim ah horumarinta ganacsiyada online. Istaraatijiyadaha raadinta mashiinka raadinta waxay keenaan natiijooyin qiime sare leh haddii si sax ah loo fuliyo. Sidaas, aynu u sii gudubno mawduucan oo arag sida inta suuq-geynta suuqa oo ku xiran tahay SEO.
Wadashaqeynta SEO ee aasaasiga ah ee Kooxaha Suuq-geynta ee Shabakada
Maalmahan, badiba kuwa suuqa-xayeysiiya ee internetka iyo naqshadaha shabakada waxay ku jiraan xeeladaha asaasiga ah ee SEO ee istaraatiijiyadoodooda. Taasi waxay dhacaysaa maaddaama maanta hababka SEO ay tahay mid dhammeystiran oo isku dhafan horeyba. Waxay si guul leh ula shaqeyneysaa hababka kale ee suuq-geynta suuq-geynta maalin kasta. Waa kuwan qaar ka mid ah farsamooyinkaas:
Istaraatiijiyada Mawduuca: Content waa boqor, hantida qiimaha leh ee SEO, qalab awood leh - u wac waxa aad jeceshahay. Waa xaqiiqo aan la aqbali karin oo miisaaniyadda SEO badankoodu ku tiirsan yihiin abuuritaanka content. Hirgelinta istaraatijiyad guuleysi leh oo la socota SEO-ga ayaa si deg deg ah u kobcin kara maaha kali-kali-gelinta laakiin sidoo kale waa astaanta astaanta.
Suuq-geynta Warbaahinta Bulshada: Waxaa aad loogu talinayaa in lagu daro barnaamijkaaga warbaahinta bulshada oo ah istaraatejigaaga SEO si aad u gaarto dhammaan faaiidooyinka SEO. Saamiyada bulshadu waa mid ku haboon in lagu soo celiyo dabeecadaha dabiiciga ah ee khayraadkaaga. Maxaa kale, waxay tilmaamayaan haddii istaraatiijiyadaada content ay si fiican u shaqeyneyso ama u baahan tahay cusbooneysiin.
Raadinta Lacagta: adoo isku dardaraya Google Analytics iyo SEO, waxaad xallin kartaa ereyada qaaliga ah ee qaaliga ah, markaa helitaanka gaadiidka dabiiciga ah. Kooxaha raadinta lacag bixinta waxay la shaqeyn karaan kooxaha SEO iyada oo la hagaajinayo qodobo dhowr ah, oo ay ku jiraan qorshooyinka muhiimka ah, bogagga soo degaya, istaraatiijiyada duleed ee isdhexgalka iyo khadka.
Xidhiidhka Dadwaynaha: Maaraynta sumcadda internetka waa talaabo muhiim ah oo ku saabsan istaraatiijiyada SEO. Kooxaha PR ayaa si weyn uga faa'iideysan kara iyaga oo iskaashi ka samaynaya SEO: Bandhiga bandhiga wuxuu kari karaa labada: joogitaanka online iyo raadinta muuqaalka.
Beddelidda: Isku-dubaridaha xeeladaha is-weydaarsiga iyo SEO ayaa kor u qaadi kara natiijooyinka organic. Haddii aad la kulantid waayo-aragnimada ugu wanaagsan ee dadka isticmaala safarka dhabta ah, waxaad ku soo celinaysaa dadka isticmaala boggaaga. Ka fikir akhrinta khariidadaha kulaylka si aad u fahamtid isticmaalayaashaada si ka fiican. Sidoo kale, si joogto ah u tijaabi UIgaaga.
Sida aad u arki karto, SEO waxay iskaashi la samaysaa habab badan oo ku dhex jira suuq geynta.
SEO waa wax soo kordhay: maalin kasta waxaan aragnaa fursado raadin cusub. Waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid si aad uga fogaato sawiradaada waa inaad cadeyso oo aad la socotid kooxdaada dijital ah. U sheegaan waxa aad sameyneyso, u sheeg wixii ku saabsan talaabooyinka ku xiga, la wadaag fikradahaaga SEO ee leh khabiiro dhijitaal ah oo arag waxa dhacaya bil gudaheed Source . Laga yaabee, waxaad jeclaan lahayd natiijooyinka wada shaqeyntan oo kale!